အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းမှ အညတရ သူရဲကောင်းများ အကြောင်းနဲ့ ကိုဗစ်တခါစစ်ရင် အစိုးရကုန်ကျတဲ့စရိတ် - Zet Star
အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းမှ အညတရ သူရဲကောင်းများ အကြောင်းနဲ့ ကိုဗစ်တခါစစ်ရင် အစိုးရကုန်ကျတဲ့စရိတ်
ဘာလိုလိုနဲ့ NHL မှာ ကူခွင့်ရတာ ၂လ ပြည့်ပြီ… ဒီ September-October ၂ လလုံးကို ၁ရက်ခွဲပဲ နားလိုက်ရတယ်…. ၂ လလုံး ကြုံသမျှ တွေကလဲ အမှတ်ရစရာတွေချည်းပဲ… အထူးသဖြင့် ဒီမှာ လူမသိပဲ ပေးဆပ်နေတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ တကယ်ရှိတယ်
Microbiologist တွေဖြစ်တဲ့ Dr.Zay Yar Htun ဆို အမြဲ ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲ….. မနက်တိုင်း ၉နာရီ ရောက်လို့ကြည့်ရင် သူက Duty ဝတ်စုံနဲ့ Lab ထဲ တောင်ဝင်နေပြီ…. သူနဲ့အတူ ကြည့်လိုက်ရင် Dr.Win Mar Khaing လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့….မနက်၉ဆို ထမင်းတောင်မစားပဲ Lab ထဲဝင်နေပြီ ဘယ်ချိန်မှ ပြန်ထွက်ကြရတယ်ထင်လို့လဲ? မနက်၉ကဝင်ရင် နောက်နေ့မနက် ၁,၂ မှ ပြန်ထွက်လာကြရတယ် ပြီးရင်လဲ သူတို့က Data Room မှာ Lab ID Registraion ကိုလာကူသေးတယ်
ပြီးရင် ဒုတိယညွှန်မှုးဖြစ်တဲ့ Dr.Ohnmar Swe Tin နေ့တိုင်း လာတယ် နားရက်ကိုမရှိဘူး အစ်မ Ohn mar ဆီလာတဲ့ဖုန်း တွေ ဘယ်လောက်များလဲဆို သူ့ဖုန်း Ringtone က ကိုယ်တွေအိမ်မက်ထဲပါမက်တဲ့အထိပဲ Single Minute တိုင်းမှာ2call လောက်က ဝင်နေတာ (တစ်နိုင်ငံလုံးကဝိုင်းဆက်နေတာကို) နောက် Lab ထဲက Technician တွေ…. သူတို့လဲ Microbiologist တွေနည်းတူ Lab ထဲ အတူဝင်ကြရတယ်… ပြန်ထွက်လာရင် မျက်နှာမှာ Mask အရာတွေက သွေးချည်ဥ…. ပြီးရင် မိန်းကလေးတွေဆိုနေ့တိုင်း သန်းခေါင်ကြီး ခေါင်းပါလျှော်ကြရတယ် အဲ့အချိန်မှ လဲသူတို့ပြီးကြတာကို..
နောက် Dr.Zayar Tun ရဲ့ ဇနီး…Dr.Jue Jue မဂျုး သူလဲ ကိုဇေကြီးနီးပါး ပင်ပန်းတယ် ကိုဇေကြီး Lab ထဲဝင်နေတဲ့အချိန်ဆို သူက သူ့ Duty ပြီးတာနဲ့ Data Room ထဲလာကူပြီ… အမြဲတမ်းကိုဇေကြီးနဲ့ပဲအတူပြန်တယ်…(ချစ်တာချစ်တာ) သူတို့ကော ဘာတွေ စွန့်လွှတ်ရလဲဆိုရင် သားသမီးအနားအတူရှိရမဲ့ အချိန်တွေ စွန့်လွှတ်ကြရတယ်… Dr.Win Mar Khaing ဆိုလဲ ကလေးမွေးနေ့တောင် အချိန်လုရတယ်…. ကလေးအနားမရှိပေးလိုက်နိုင်ဘူး Dr.Jue Jue ဆိုလဲ ဒီလိုပဲ… ကလေးကိုဖုန်းနဲ့ပဲ အမြဲ…အသံလေးနားထောင်ကြရတယ်
ဒီလိုပဲ NHL က Lab Technician တွေ အခြားသော တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေလဲ အဲ့လိုအဖြစ်တွေချည်းပဲ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတဲ့ သူတွေကအစ ဒါ NHL မှာ လက်ရှိ အဖြစ်အပျက်လေးတွေပေါ့…. အခုဒီရက်ပိုင်းကလဲ Negative တွေ ထွက်တာများလာတော့ အချို့လူတွေက အရင်လိုသိပ်ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး….. အခုတောင် ဒီ Frontline တွေကပင်ပန်းစပြုနေကြပါပြီ…. အချိန်ကာလကလဲ ၁လကျော်ကြာတောင့်ခံလာကြတာဆိုတော့…. ကျနော်တို့ Data ပိုင်းကလဲ ပင်ပန်းစပြုလာပြီ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်က ကျနော်ဆို ဖျားပြီး ဆေးပါထိုးရတယ်… ဒီရက်ပိုင်းမှာကလဲ မိုးတွေက ရွာလာပြီ အဲ့တော့ ဖျားနာတဲ့သူတွေလဲ ပိုပေါ်လာတော့မယ် ကိုဗစ် သံသယလူနာတွေလဲ ပိုပေါ်လာတော့မယ်ဗျ…. အဲ့တော့ ကျေးဇူးပြု၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တွေကို သနားသောအားဖြင့် အိမ်မှာပဲ နေပေးကြပါဦးဗျာ….. အပြင် မထွက်ကြပါနဲ့ဦး…. တိုင်းပြည်ကလဲ အဲ့လောက်ထိချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူး
လူတစ်ယောက်ကို ကိုဗစ် ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့ကိုပဲ ၁ သိန်းခွဲကနေ ၇ သိန်းလောက် ကုန်ကျတာ….. ဆေးရုံမှာထားတဲ့ စရိတ်မပါသေးဘူးနော်… ကြားထဲက လိုတာအကုန်ဝယ် ဖြည့်ဆည်းပြီး Customer Service ပါပေးနေရတဲ့ ဆရာဝန်တွေ သူနာပြုတွေ ဝယ်ပေးနေရတဲ့ အကြောင်းမပါသေးဘူး…. Sample တွေကိုပို့ဆောင်ရတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်တွေ လူနာတွေကိုပို့ဆောင်ရတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်တွေ မပါသေးဘူး…. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွေကို Support ရတဲ့ စရိတ်တွေ မပါသေးဘူး
ဒါတောင် အခွန်ဆောင်ထားကြလို့ ဒီလောက်လေးတောင့်ခံနိင်တာ…. လထပ်ကြာရင် တောင့်ခံနိုင်မယ်မထင်ဘူး…. အဲ့ကျရင် အခု ကျတဲ့စရိတ်တွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကျခံကြရရင် ရိုးရိုးဖျားလားမဖျားလား လာမပြောနဲ့… ကိုဗစ် စစ်ရမှာပဲ… အဲ့မှာ ၁သိန်းခွဲကနေ ၇သိန်း…. Sample ပို့ဆောင်ခ ၅၀၀၀-၅သောင်း… ဆေးရုံစရိတ်ကတော့ တွက်ကြည့်
အဲ့တော့ လူတစ်ဦး က သံသယလူနာဖြစ်တာနဲ့တင် သိန်းဂဏာန်းကထွက်နေပြီ….. မချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံကြီး / ရှေ့တန်းကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ / အကူတွေကို မကူညီရင်နေပါဗျာ…. ဒုက္ခတွေတော့မပေးကြပါနဲ့…. MOHS ကညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာပေးရုံနဲ့တင် ကူညီရာရောက်ပါတယ်
← ကိုယ့်ဆန္ဒတခုထဲပဲ ကြည့်ပြီး Q စင်တာကနေ ထွက်ပြေးတဲ့ တကိုယ်ကောင်းသမား ရန်ကုန်ပြန် ၂ ဦး
ပိုးတွေ့ လူနာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ မြောက်ဥက္ကလာက ဖျားနာကုဆေးခန်းမှာ ကိုဗစ်စစ်ကိရိယာများ မလုံလောက် →